काठमाडौं, माघ ६ गते । कोरोना भाइरसको नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ समुदायस्तरमा फैलियसँगै कोरोना नियन्त्रण थप चुनौतीपूर्ण बनेको छ । नयाँ भेरियन्ट ‘ओमिक्रोन’ देखिएपछि संंक्रमितको ग्राफले रेकर्ड तोड्दै आएको छ । सरकारले माघ २ गतेदेखि ज्येष्ठ नागरिक र अग्रपङ्तिमा काम गर्नेलाई अतिरिक्त मात्र (बुष्टर डोज) खोप लगाउन सुरु गरेको छ ।
माइक्रोबायोलोजिस्ट डा. प्रकाश घिमिरे पूर्ण मात्र जुन खोप लगाएको हो बुष्टर त्यही लगाउन सुझाव दिनुहुन्छ । फरक खोप प्रयोग गर्दा एन्टिबढी राम्रोसँग विकसित हुन्छ भन्ने विषय अध्ययनकै क्रममा रहेको भन्दै उहाँले उही खोप प्रयोग गर्न सुझाव दिनुभएको छ ।
कोरोना महामारी अहिलेका लागि नयाँ भए पनि विश्वले यस्ता थुप्रै महामारी सामना गरेको छ । जनावरबाट मानिसमा सरेर फैलिने महामारीको आयु पाँच वर्षसम्मको हुने घिमिरे बताउनुहुन्छ । कोरोनासमेत पाँच वर्षसम्ममा संक्रामक हुन नसक्ने अवस्थामा पुग्ने उहाँको भनाइ छ । ‘जनावरबाट मानिसमा सरेका महामारी निम्त्याउने भाइरस तीनदेखि पाँच वर्षमा कुनै संक्रमण गर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको इतिहास छ’, डा. घिमिरे भन्नुहुन्छ, ‘यो भाइरस विस्तारै कम संक्रामक हुन्छ ।’ विष्णु पाण्डेय र मनोजरत्न शाही तयार पार्नुभएको दृश्य समाचार